Izindlela zokwelapha ze-homeopathic ziyaqhubeka zifakwa emtholampilo evamile. Kukholelwa ukuthi izidakamizwa ezinjalo azikwazi ukulimaza umzimba, ngoba zinezithako zemvelo kuphela nezitshalo ezitshalayo. Ngaphezu kwalokho, ezinye zezinto ezisebenzayo azitholakali egazini lomuntu. Yilokho okwenza odokotela bangabaze ukuphumelela kwe-homeopathy.
Isihloko sanamuhla sizokunikeza ngolunye lwala mathuluzi. Igama layo lohwebo ngu-Notta. Uzofunda mayelana nokusetshenziswa kwalesi sidakamizwa futhi ungajwayela impendulo eyakhayo ngawe.
Incazelo yemithi: ihlanganisani nokuthi ibiza kanjani?
Ukuma kwemiyalelo ye- "Nott" njengendlela yokwelapha ekhaya elingakwazi ukulimaza. Umkhiqizo wenziwa inkampani yase-Austrian uBittner Richard. Ungathenga amaconsi cishe noma yiliphi ikhemisi. Ama-homeopathic amalungiselelo athengiswa ngaphandle kwemingcele, ngakho ngeke udinga imithi. Kuyafaneleka isilinganiso sama-ruble ama-500. Esigumbini sekhadibhodi yisigqoko seglasi elimnyama elinomsindo wama-milliliters angu-50. Futhi ekuthengisweni yizibhebhe zegama elifanayo nokubunjwa okufanayo.
Izithako ze-homeopathic nezakhi ziqukethe "amaconsi" ka-Notta. Imfundo ikwazisa ngezinto ezilandelayo:
Isihlahla sekhofi sithatha;
Njengengxenye eyengeziwe i-ethyl alcohol. Ama-preservatives nama-flavour ekulungiseleleni lapho. Ukuze kube lula komthengi, imithi itholakala ngevolumu yama-20, 50 ne-100 milliliters. Inani lemithi liphakeme, likhulu amandla.
Isenzo ukuthi umkhiqizi uthembisa
Amaconsi kaNott asebenza kanjani? Imfundo ithi lesi sidakamizwa sinomphumela oyinkimbinkimbi. Kungenxa yezingxenye ezimele. Izinto ezihlangene zinikeza umphumela omuhle kuwo wonke umzimba.
Ngokwe-annotation, imithi ine-calming effect, ijwayele ukusebenza kwesistimu yezinzwa, ithuthukisa ukujikeleza kwegazi. Futhi, amaconsi abangela ukukhuphuka kokuzivikela komzimba kanye nokuphikiswa okuvamile komzimba. Zinezimpembelelo, ngenxa yokukhishwa komuthi wekhofi. Isidakamizwa sinomthelela wokuthula, sivame ukulala komuntu, ngenxa yokuthuthukiswa kwenhlalakahle jikelele kanye nomsebenzi wazo zonke izitho nezinhlelo ezisungulwe.
Izinkomba zokusetshenziswa nokulinganiselwa
Naphezu kokuthi imiyalo "ye-Nott" ibekwe njengemiyalo ephephile, ngaphambi kokuwasebenzisa, kufanele ufunde isichasiselo futhi uthole impendulo. Uma kunethuba, kuphakanyiswa futhi ukuba uthintane nodokotela. Kodwa izibalo zibonisa ukuthi abathengi abaningi basebenzisa ama-homeopathic compounds ngokwabo, bethembele ekubunjweni kwabo kwemvelo.
Isibonakaliso sokusetshenziswa kwe-ejenti echazwe yikhulu lokukhathazeka, ukwesaba, izimo ezicindezelayo. Basebenzisa le nzobuhlengikazi yokuphazamiseka kokulala, ukwanda okukhulu, ukungakwazi ukugxilisa ingqondo yabo, ukungabikho kwengqondo. Kunqatshelwe ukuthatha imithi ngokuzwela okukhulu kunoma yikuphi ingxenye yesidakamizwa "Notta". Imiyalo yokusetshenziswa kokudonsa ayiphakanyiswa ukuba isetshenziswe ngabantu abanesifo sokuphuza utshwala, njengoba bequkethe utshwala. Angenza umuntu aqhubeke nokuphuza utshwala.
Uyazi kakade ukuthi umuthi "Notta" (amaconsi) uyathulisa. Imfundo iphakamisa ukusebenzisa imithi njengoba kunqunywe yi-abstract. Kwezinye izimo, udokotela angenza ukuqokwa komuntu ngamunye. Ungalokothi uwedlule umthamo onqunyiwe wempendulo yase-homeopathic.
Iziguli ezindala zibekwe uhlelo lokusebenza kathathu ngosuku umthamo wamaconsi angu-10. Uma kunesidingo, ungakwazi ukuhlanza izidakamizwa ngezipuni ezinamafutha. Ngaphambi kokugwinya ikhambi, yibeke isikhashana emlonyeni. Zonke izingoma ze-homeopathic, kuhlanganise no-Notta, zithathwa isigamu sehora ngaphambi kokudla noma ihora elilodwa ngemuva kokudla.
Emfundweni yokusetshenziswa kukhona ukubhuka ukuthi uma kubalulekile ukuthuthukisa umphumela, kuvunyelwe ukuthatha imithi njalo ngehora. Ngakho-ke ingxenye yansuku zonke akufanele ithathe amaconsi angaphezu kuka-80 kwisiguli somuntu omdala.
Yehla "I-Nota" yezingane: imfundo
Ngingayisebenzisa leli thuluzi kumazinzi? Ingxabano ephikisanayo ngalolu daba iyaqhubeka nanamuhla. Abanye odokotela bayaqiniseka ukuthi ama-homeopathic amalungiselelo akufanele anikezwe izingane, ngoba isenzo sabo asizange sifunde ngokugcwele. Ngaphezu kwalokho, amaconsi aqukethe utshwala. Abanye odokotela baqinisekisa: umuthi awukwazi ukulimaza ingane, futhi inani le-ethanol elingena emzimbeni womntwana alincane. Ngakho ungaba kanjani? Yini etshela umthengi wemilayezo ethi "Notta" imiyalelo yokusetshenziswa?
Ukwehla kwezingane kunqunywe umthamo omdala eminyakeni engu-12. Kuze kube yilokho kunconywa ukuba unike ingane ingane yehla izikhathi ezintathu ngosuku. Uma kunesidingo sokwandisa umphumela (ngokuvamile lapho kuqala ukwelashwa), khona-ke unganika amaconsi amathathu njalo ngehora. Isidakamizwa akufanele sithathwe izikhathi ezingaphezu kwezingu-8 ngosuku.
I-annotation ithi imithi ayikwazi ukubangela ukungalungi nemiphumela emibi yokwelapha. Isidakamizwa sithinta kahle isimo sesiguli. Kodwa kukhona enye idatha. Abanye abantu babika ukuthi amaconsi abangele ukubola. Kubonakaliswe ukuqubuka nokushaya. Kwakukhona nesifo sokugaya ukudla. Zonke lezi zikhalazo aziqinisekisiwe emtholampilo, ngoba empeleni akunakwenzeka ukucacisa okuqukethwe kwezinto ezisebenzayo emzimbeni womuntu. Ngakho-ke, uma unemiphumela emibi engalindelekile, ungawagodli. Qinisekisa ukuthi utshela udokotela mayelana nokuphendula bese uyeka ukusebenzisa imithi ephunga.
Ngenxa yokuthi imithi ine-ethanol ekubunjweni kwayo, akufanele isetshenziswe ngesikhathi sokukhulelwa kanye ne-lactation. Lesi sici singathinta ingane kakhulu. Kuyingozi kakhulu ukusebenzisa amaconsi "a-Notta" ku-trimester yokuqala. Kodwa imiyalo yalolu daba ayisho lutho. Odokotela banikeza izixwayiso ezinjalo.
Akudingekile ukuhlinzeka ngemithi izingane kuze kube yiminyaka emithathu. Isikhathi sokuzalwa esisha akukhonjisiwe kuma-contraindications. Ngaphezu kwalokho, lesi sidakamizwa sivame ukushiwo izinsana uma kwenzeka ubuthongo obubi futhi sikhuphuke ngokweqile. Cabanga izikhathi eziningana ngaphambi kokuqala ukwelapha okunjalo. Qinisekisa ukuthi uthintana nodokotela wezinzwa zezingane.
Ungathathi uhla lwe-Nott ngenkathi ushayela futhi wenze umsebenzi obalulekile. Imithi inganciphisa ukunakwa futhi iphuze ukuphendula. Yonke le datha kufanele ilandelwe, naphezu kokuthi ayinayo imiyalelo yokusetshenziswa ehlanganiswe nokulungiswa kwe-Notta.
Ukudonsa izingane: ukubuyekezwa kwabantu abadala
Ikhambi le-homeopathic liveza imibono ehlukene ngokwabo. Abazali bahlukaniswe ngamakamu amabili. Abanye bathi izidakamizwa ziphephile futhi ziphumelela, ngoba zasiza ingane ukuba ihlaziye. Ukulala kwengane evamile, ukwanda kwesidlo. Ezinye izingane ziqala ngisho nokuhlupheka kancane. Eminye imibono ihlukile. Abazali babika ukuthi imithi ayizange ilisize ukuxazulula le nkinga kuphela. Lesi sidakamizwa senza nokuthi izimpendulo zenzeke kanjani: ingane yayinezinkinga zokungezwani, ubuhlungu besisu buqala. Kulesi sixhumano, i-crumb iyajabula nakakhulu. Abazali baqaphela izindleko eziphezulu zomuthi.
Uma ucabangela ukubuyekezwa kwabathengi abadala, ungathola ukuthi cishe bonke banelisekile ngamaconsi akwaNoti. Iziguli zithi umphumela awukwenzi ulinde. Sekuvele ngosuku lokuqala lokusetshenziswa, umphumela wezidakamizwa uzwakala kahle. Okunye futhi ukwelashwa kwe-homeopathic futhi ukuthi kungathathwa izinyanga ezimbalwa ngaphandle kokuphazanyiswa.
Kusukela esihlokweni esinikeziwe owazile ngemithi ephumuzayo "Nota" (amaconsi). Ukufundiswa kwezingane, impendulo kuhlelo lokusebenza kanye nezici zokusetshenziswa kubantu abadala banikezwa isingeniso sakho. Naphezu kwazo zonke i-odes yokubonga kanye nemibono emihle yabasebenzisi, akufanele usebenzise lawa mathuluzi. Ayaziwa ukuthi azoyithinta kanjani umsebenzi womzimba wakho. Cabanga izikhathi eziningana ngaphambi kokuqala ukuzitholela. Qinisekisa ukuthi ulinganisa izinzuzo nezindleko, kodwa kungcono uxoxe nodokotela ukuze uthole iseluleko. Yiba nempilo enhle, ungaguli!
"Ezempilo zaseSiberia": ukubuyekezwa odokotela komkhiqizi wokuqala waseRussia wokudla okunamakhemikhali
Isithende iqhubezela: amakhambi ukwelashwa Folk (iodine, uviniga, amaqanda)